योद्धाले ३ वर्षभित्र पिकअपको बजारलाई... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
योद्धाले ३ वर्षभित्र पिकअपको बजारलाई नेतृत्व गर्छः घिमिरे
नेपालमा ‘पिकअप’को माग बढ्दो छ। घुमाउरो तथा साघुँरो बाटोमा ठूला मालवाहक गाडी लैजान नसकिने र शहरी क्षेत्रमा दिउँसोको समयमा ठूला ट्रक लैजान नपाउने भएकोले पनि यसको माग बढीरहेको जानकारहरु बताउँछन्।
त्यस्तै, यसको ठूला गाडी भन्दा मूल्य कम पर्ने भएकोले थोरै लगानी भएका उद्यमीहरुको रोजाइमा पिकअप पर्ने गरेको छ।
टाटा मोटर्सको नेपालको लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङले पनि २०१७ देखि नेपाली बजारमा ‘टाटा योद्धा’ प्रवेश गरायो।
नेपालमा पिकअपको अवस्था, भविष्य, योद्धाको स्थिती लगायतको विषयमा सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालीका पिकअप सेग्मेन्टका उप–प्रवन्धक रामेश्वर घिमिरेसगँ सेतोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–
नेपालमा ‘पिकअप’को बजार कस्तो छ?
नेपालमा विकाश निर्माणको काम तिब्र गतीमा भइरहेको छ। सरकारले पनि स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढाइरहेको छ। प्रादेशिक राजधानी, जिल्लाको सदरमुकाम, स्थानिय तह लगायत सबै ठाउँमा काम अगाडि बढिरहेको छ।
विकाश बढ्दै जाँदा वस्तु खपत पनि परिर्वतन हुँदै जान्छ। पहिले मान्छेले गाउँमा जे पाइन्थ्यो, बजारमा जे पाइन्छ त्यही चिज मात्र उपभोग गर्थे भने अहिले अफ्नो गाउँबाट शहरमा र सहरबाट गाउँमा ल्याएर उपभोग गर्न थालेका छन्।
त्यो ठाउँको सिजनमा नपाइने धेरै टाढाबाट ल्याएर भनेपनि उपभोग गर्ने बनी बढीरहेको छ। यो सम्भव गराएको पिकअप जस्ता गाडीहरुले हो। यसले सजिलै एकठाउँबाट अको ठाउँमा सामान पुर्याउन सक्छ त्यसकारण यो सम्भव भएको हो।
ठूला ट्रकहरुमा थोरै सामान राखेर अर्को ठाउँमा पुर्याउदा खर्चको हिसावले सहज हुन्थेन र ग्राहकले धान्न सक्थेनन्। त्यसकारण पनि पछिल्लो समय पिकअपको बजार बढिरहेको छ।
सिप्रदीले २०१७ मा योद्धा ‘पिकअप’ ल्यायो। यसलाई नेपाली ग्राहकले कत्तीको रुचाए?
पिकअप सेग्मेन्टमा टाटा मोवाइल देखिको योद्धासम्म आइपुग्दा हामीले धेरै फेजहरु पार गर्यौ। टाटा मोवाइलको निकै राम्रो २०७ डिआई भन्ने पिकअप देखी टाटा जेनन पिकअप ल्यायौ।
जब टाटा योद्धा हामीले नेपाली बजारमा ल्यायौ त्यो बेलामा हामीले सिधै बिक्री लगेनौ।
हामीले योद्धा बजारमा टाटामोवाइल भन्दा उत्कृष्ट प्रोडक्ट हो भनेर प्रमाणीत गर्न चाहान्थ्यौ। सुरुमा हामीले मेचिदेखि
महाकालीसम्मको विभिन्न पार्कीङमा गएर त्यहाँ रहेका चालकलाई लक्षित गरेर इन्डोरेन्स ड्राइभ नामक टेष्ट ड्राइभ क्याम्पेन चलायौ।
करिव ४ हजार चालकसगँ प्रतिकृया लियौं। उहाँहरुको प्रतिकृयाको आधारमा राम्रा कुरा राखेर कमजोरी हटाएर दोस्रो चरणको प्रमोसनमा लाग्यौ।
इन्डोरेन्स ड्राइभ नामक त्यो क्याम्पेनमा टाटाको पिकअपका पुराना ग्राहक कसैलाई गाडी चाहिएको छ तर खरिद गर्ने संकोचमा छन् भने उहाँहरुलाई कम्तीमा एक हप्ताको लागि चलाउन दियौ। यसले गर्दा यो गाडीको क्षमता, माइलेज लगायत कुरा आफैले अनुभुत गर्नुभयो।
त्यसपछि बिस्तारै हाम्रो गाडीको ‘वर्ड अफ माउथ पब्लिसिटी’ हुँदै गयो। त्यसपछि हामीले सिमित व्यक्तिलाई मात्र योद्धा दियौ। ती उपभोक्ताहरुको ३०/४० हजार किलोमिटर चलाएसम्म प्रत्यक महिना फोन गरेर कमाई, खर्च, गाडीको नकारात्मक पक्ष, सकारात्कम पक्ष लगायतको प्रतिकृया लियौँ। त्यसपछि बल्ल योद्धालाई पुर्णरुपमा बजारमा ल्याएका हौँ।
२०१७ मा गाडी बजारमा ल्याउँदा मार्केट लिड गर्ने हाम्रो जुन लक्ष्य थियो त्यसको हामी निकै नजिक छौ। सिङ्गल क्याबिन ४/२ सेग्मेन्टमा हामी छिट्टै मार्केट लिड गर्दै छौ।
योद्धा डबल क्याबिन ४/४ नेपाल भित्राउनुको उद्देश्य चाहीँ के हो?
पिकअप सेग्मेन्टमा हामीले चरणबद्ध रुपमा ‘ग्रोथ’ गर्न खोजेका थियौं। एकैपटक सबै भेरिएन्ट ल्याएर ग्राहकहरुमा अलमल गराउँनु भन्दा सुरुमा सिङ्गल क्याबिन ४/२ लाई स्थिापित गर्ने त्यसपछि अरु भेरियन्टहरु थप्दै जाने लक्ष्य थियो।
हाल सिङ्गल क्याबिन ४/२ मा मार्केट लिड गर्ने चरणमा पुगिसकेपछि डबल क्याबिन ४/४ लाई अगाडि बढाएका हौ। हामीले सिङ्गल क्याबिनलाई जसरी स्थापित गर्यौ त्यसरी नै डबल क्याविनलाई पनि स्थापित गर्न लागि परेका छौ।
यी दुई भेरिएन्टका योद्ध पिकअपका प्रयोजन के हो?
नेपालमा पिकअपको २ प्रकारको बजार छ। काठमाडौमा हेर्ने हो भने दिउँसो ट्रकहरु चलाउन पाइदैन। यस्तै नियम अन्य ठूला–ठूला शहरुहरुमा छ। ४/२ का पिकअपहरुले शहरभित्रका विभिन्न गल्ली तथा कुना कुनासम्म सामन दुवानी गर्न निक्कै ठूलो मद्दत पुर्याइरहेको छ। त्यस्तै डबल क्याबिन ४/४ को माग पहाडी भु–भागमा धेरै छ।
त्यहाँ यातायातको विकल्प नै पिकअप हो। नयाँ ट्रयाक भर्खर खुलेको, भर्खरै नयाँ बाटो खुलेको, उबड/खावड सडकमा डबल क्याबिन ४/४ ले प्यासेन्जरदेखि भारिसम्म बोक्न सक्षम हुन्छ।
थोरै पुजीँ भएका व्यक्तिले योद्धा किन्न सक्छन् त?
हाम्रो लक्ष्य नै बिदेशबाट अलिअलि कमाएर नेपाल फर्किएका, वा नेपालमै स्वरोजगार हुन चाहने युवाहरुले खरिद गर्नसक्ने मूल्यमै यो गाडी आउँछ। करिव ३० प्रतिशत डाउन पेमेन्टमा धेरै फाइन्यान्स गराएर किस्तामा पैसा तिर्न मिल्नेगरी यो गाडी आउँछ।
त्यो भनेको ६ देखि ७ लाख लगाउन सक्ने मान्छेले यो गाडी किनेर आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न वा भइरहेको व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न सक्नुहुन्छ।
किस्तामा योद्धा खरिद गर्न कत्तीको सहज छ?
योद्धा खरिद गर्न चाहाने ग्राहकले सिप्रदीसगैँ जोडिएर फाइन्यान्स पाउँनुहुन्छ। सिप्रदीको आफ्नै हायर पर्चेज मार्फत फाइन्यान्सको सुबिधा पनि छ।
हामीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासगँ सम्झौता पनि गरेका छौँ। जसले गर्दा ग्राहकको सामान्य कागजपत्रको आधारमा थोरै डाउन पेमेन्ट र थोरै ब्याजदरमा किस्तामा गाडी पाउनुहुन्छ।
नेपालका बिकट ठाउँहरुमा सडक त्यती राम्रो छैन। यस्तो सडकमा योद्धालाई विश्वास गर्न सकिन्छ?
योद्धा ४/४ डबल क्याबिन यस्तै सडकहरुलाई डिजाइन गरिएको गाडी हो। यो गाडी पिच गाडीमा चलाउँदा भाडा पोसाउँदैन। मर्मतको हिसाबले ४/२ को दाजोमा ४/४ गाडी थोरै महंगो हुन्छ। साामन्यतया ४/४ भाडा राम्रो पाइने भु–भागमा चलाइन्छ। सडक नराम्रो भएको ठाउँमा योद्धाको ४/४ राम्रो विकल्प हो।
योद्धा बीच बाटोमै बिग्रिएको अवस्थामा ग्राहकको लागि केही सुविधा ल्याउनु भएको छ?
सिप्रदीको नेपालभर ५३ ओटा भन्दा धेरै आफ्नै वर्कसपहरु चलिरहेको छ। त्यो बाहेक जाहाँ हाम्रो वर्कसप छैन त्याहाँको लोकल ग्यारेज टेक्निसियनहरुलाई ट्रेनिङ गराएर फस्ट एड टेक्निसियन रुपमा तयार पारेका छौ।
त्यस्तै अहिले सिप्रदीसगँ २४ ओटा सर्भिस भ्यानहरु छन्। धेरै प्रोजेक्टहरु चलिरहेको स्थानलाई टार्गेट गरेर मोवाइल वर्क सप (ट्रकमै वर्कसप) पार्क गरेर राखेका हुन्छौं र केही समस्या आए समाधान गर्छौ।
योद्धाको स्पेयर पाट्सको मूल्य कस्तो निर्धारण गर्नुभएको छ?
पछिल्लो समय सबै गाडीहरुमा एड्भान्स टेक्नोलोजी प्रयोग भएका छन्।
योद्धाको सबै गाडी युरो ४ स्ट्याडर्डमा आउँछ। यो रेन्जको गाडी मर्मतमा ग्राहकलाई समस्या नहोस भनेर धेरैजसो बिग्रिरहने २० ओटा पाट्सहरुमा मूल्य थोरै राखेका छौ। त्यसले गर्दा अरु गाडी चलाउनु भन्दा योद्धा चलाउँदा ग्राहकले धेरै बचाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईहरुले मुस्ताङसम्म योद्धाको र्याली पनि गर्नुभयो, त्यसको परिणम कस्तो आयो?
योद्धा २/२ सिङ्गल क्याबिनको सफलतापछि अहिले ४/४को प्रमोसनमा लागिरहेका छौ। २०२०/२१ सम्ममा ४/४ लाई स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। पोखरादेखि मुक्तीनाथसम्म यो र्याली यसैको लागि हो।
यो र्यालीमा हामीले १० ओटा गाडी प्रयोग गरेका थियौ। नेपालमा कर्मसियल गाडीमा यस्तो र्याली भएकै थिएन। ४/४ डबल क्याबिन चल्ने भनेको पहाड र तराइमा हो। र्यालीको उद्देश्य फरक–फरक मौसममा, तापक्रममा र भुगोलमा यो गाडीको प्रफमेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने थियो।
योद्धाले पोखरा जस्तो समथर भु–भागदेखिदेखि ३४ सय मिटरमा रहेको मुक्तिनाथसम्म १७० किलोमिटरभन्दा धेरै दूरी पार गर्यो। यस्तोमा धेरै गाडीहरुमा स्टार्ट नहुने समस्या हुन्छ। तर त्यस्तो समस्या भएन।
तपाईहरुको अबको लक्ष्य केहो?
अबको हाम्रो लक्ष पिकअप सेग्मेन्टमा मार्केट लिड गर्ने हो। २०२१ मा सिङ्गल क्याबिन ४/२ मा मार्केट लिडर बन्दैछौ। त्यस्तै तिन वर्षभित्र समग्र पिकअप सेग्मेन्टमा मार्केट लिड गर्छौ।
यसको वारेन्टी कस्तो छ?
बजारमा उपलब्ध सबै पिकअपमध्ये हामीले उत्कृष्ट प्रदान गरेका छौ। यसमा ३ वर्ष वा ३ लाख किलोमिटर वारेन्टी प्रदान गरेका छौ। तर ग्राहकले तालिकाअनुसार कम्पनीको आधिकारिक वर्कसप सर्भिसिङ भने गर्नुपर्छ।
बजारमा अरु पनि प्रतिष्ठित ब्राण्डका पिकअप छन्, योद्धा नै किन किन्ने?
बजारमा उस्तै देखिने विभिन्न ब्राण्डका पिकअप छन्। योद्धा नै किन किन्ने भन्दा एउटा त सिप्रदीसगँको ग्राहकको ४० वर्षदेखि विश्वास कायम राखेका छौं। अर्को भनेको प्रोडक्टको प्रफमेन्स हो।
हामीले अरु पिकअपसगँ योद्धालाई सगैँ राखेर परीक्षणहरूमा हाम्रो गाडीमा अरुमा भन्दा राम्रो माइलेज, धेरै लोड बहन क्षमता, अरु गाडी भन्दा छिटो पुग्ने र समग्र प्रफमेन्स राम्रो छ। यसले गर्दा ग्राहकको बचत बढ्छ। त्यसैले योद्धा खरिद गर्दा ग्राहकलाई पछुतो हुँदैन।
अन्त्यमा, पिकअप खरिद गर्न चाहाने ग्राहकलाई केही भन्नु छ?
पछिल्लो अढाई वर्षदेखि हामीले योद्धालाई प्रोमोट गरिरहेका छौ। सडकमा योद्धाको उपस्थिती निकै राम्रो छ। ग्राहकको सुविधाको लागि सिप्रदी अटो पाट्सको ५ सय भन्दा धेरै सन्जालमार्फत नेपालभर पाट्स पुर्याइसकेका छौ। त्यस्तै हामीसगँ दक्ष टेक्निसियनहरु छन्। त्यसैले योद्धा खरिद गरिसकेपछि ग्राहकले कुनै झण्झट बेहोर्नु पर्दैन।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन १६, २०७६, ००:३९:००